Beauty Knowledge Archives - WordPress Blog
တန်ဖိုးမသိလို့ လွှင့်ပစ်ခဲ့တဲ့ ထောပတ်သီးအစေ့ အသုံးဝင်ပုံများ
တန်ဖိုးမသိလို့ လွှင့်ပစ်ခဲ့တဲ့ ထောပတ်သီးအစေ့ အသုံးဝင်ပုံများ ထောပတ်စေ့ ရှိရင် စမ်းကြည့်နော် မျက်နှာမှာ ရှိတဲ့၊ဝက်ခြံအဆီအဖုတွေ ပျောက်စေမယ့် ကိုယ်တိုင်သုံးနေ တဲ့ ထောပတ်စေ့ ဆေးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။မနေ့ က ကိုယ့်အကို တစ်ယောက်နဲ့ video callပြောရင်း ဒီပို့စ်လေးရေးဖို့ စိတ်ကူးရတယ် ဆိုပါတော့၊ ကိုယ့်အကို အမတွေကို ကိုယ့်လိုလှစေချင် တဲ့စေတနာကတော့ အဓိကပေါ့နော်။ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ့် အကိုအမတွေ ထဲမှာ မျက်နှာမှာ အဆီဖုလေးတွေ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် ဝက်ခြံ နဲ့မျက်နှာ အရေးအကြောင်း ထင်တာတွေ တော်တော် များများတွေ့ရ လို့ပါ။ထောပတ်စေ့ အကြောင်းလေးမပြောခင် ကိုယ့်အကြောင်းကို အရင်ပြော ပါစေ။ကိုယ်ကတောသူပီပီ နယ်မှာနေတဲ့တလျောက်လုံးသနပ်ခါးပဲ လိမ်းပါတယ် ။ ရန်ကုန်ရောက်ပြီး၃နှစ်ကျော်ကာလလေး အတွင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် […]
VASELINEရဲ့ တမူထူးခြား အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ…
VASELINEရဲ့ တမူထူးခြား အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ… ဆိုင်မှာလည်း အလွယ် တကူဝယ်ယူရ ရှိနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းလည်းသက်သာတဲ့အပြင် အသုံးတည့်တဲ့ အတွက် Vaseline ကိုမသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။Vaseline ကို နှုတ်ခမ်းအစိုဓာတ် ထိန်းဖို့၊ အသား အရေချောမွေ့စေဖို့ အတွက် ဆိုပြီး အသုံးပြု လာကြတာပါ။ အမှန်တကယ်တော့ ဒီ Vaseline က နှုတ်ခမ်းနဲ့ အသားအရေ အ စိုဓာတ်ထိန်းရုံ အတွက်ပဲ အသုံးပြုနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားနေရာ တွေမှာလည်း အသုံးတည့်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Vaseline ရဲ့တမူထူး ခြား အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဆားဝက်ခြံများကို ကင်းစင်စေ ပါတယ်။ Vaseline ကို ဆားဝက်ခြံရှိတဲ့ နှာခေါင်းတစ်ဝိုက်၊ မျက်နှာပြင် တစ်ဝိုက်ပေါ်ကို […]
အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးတွေ ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် နုပျိုနေရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၇) ချက် နိုင်ငံတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှအပ နည်းလမ်းတွေ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် ရှိရင်တောင် အသက် ၃၅ နှစ်လို့ ထင်ရလောက်အောင် နုပျိုကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နုပျိုရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို love media ကနေ ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်နော်။ ၁။ ဆန်မှုန့်ကို အသုံးပြုခြင်း အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးတွေက ဆန်မှု့န်ကို ရေနဲ့ဖျော်ပြီး ရလာတဲ့အနှစ်ကို mask အဖြစ် ကပ်ရုံမကပါဘူး။ ဆန်မှုန့်ကို body scrub အဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ တစ်ခါတရံ ဆန်မှုန့်ထဲကို သစ်ကြံပိုးမှုန့်၊ ဂျင်းမှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်၊ စန္ဒကူးမှု့န်တွေ ထည့်ပြီးတော့လည်း […]
အမာရွတ်အမျိုးမျိုး နဲ့ ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ချိုင့်ခွက်တွေကို ကင်းစင်ပပျောက်စေမဲ့ နည်းလမ်းများ
အမာရွတ်အမျိုးမျိုး နဲ့ ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ချိုင့်ခွက်တွေကို ကင်းစင်ပပျောက်စေမဲ့ နည်းလမ်းများ လေ့လာမှုတွေအရ Vaseline အလှဆီဟာ ဈေးကြီး လိမ်းဆေး Serums နဲ့ယှဉ်ရင် ထိရောက်မှုပိုရှိပြီး ယုံကြည့် စိတ်ချရတဲ့ ဆေး တစ်လတ်ပဲဖြစ် ပါတယ်။ Vaseline ကို ၁ပတ်ကနေ ၃ ပတ်အထိ တစ်နေ့ကို သုံးကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အသားအရေ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်နိုင် မှာဖြစ် ပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာ ချိုင့်ခွက်တွေနဲ့ အရေပြားညီညာမှုမရှိ တဲ့အခါ၊ ရေကျောက်ပေါက်ပြီး အမာရွတ်တွေ ကျန်ခဲ့တဲ့အခါ၊ ဝက်ခြံပေါက်ပြီး အမာရွတ်တွေ ကျန်ခဲ့တဲ့အခါ၊ အကြောပြတ်ပြီး အရေးကြောင်းတွေဖြစ် တဲ့အခါ Vaseline ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ် ရှားစောင်းလက်ပတ်ဟာ ရာစုနှစ်များစွာ ကတည်းက အသုံးပြုလာတဲ့ […]
ဖုန်းသုံးတဲ့လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပြီး ဆင်ခြင်ရမည့် အချက်(5)ချက်
ဖုန်းသုံးတဲ့လူတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပြီး ဆင်ခြင်ရမည့် အချက်(5)ချက် ဖုန်းတွေဟာ လူတွေနဲ့ အမြဲတမ်း အတူရှိတဲ့ အဖော် တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေပါပြီ။ လူအချင်းချင်းတောင်မှ လူကောင်း လူဆိုး ခွဲခြားပေါင်းရသေးတာပဲ။ ဒီတော့ ၂၄ နာရီနီးပါး အနား အမြဲရှိနေတဲ့ ဖုန်းရဲ့ ကောင်းတဲ့ ဆိုးတဲ့ အချက်လေးတွေကို မှတ်သားထားပြီး ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို မလုပ် မိစေဖို့ သတိထား ဆင်ခြင်ကြရေ အာင်နော် (၁) ဖုန်းနဲ့ အတူအိပ်ခြင်း ဖုန်းဆိုတာဟာ အခြေခံ အားဖြင့် လျှပ်စီးသံ လိုက်စက် ကွင်းတွေကို ကူးပြောင်းပေးတဲ့၊ လက်ခံပေးတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ဖုန်းကနေ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေ ထွက်ပါ တယ်။ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေ နဲ့ အချိန်ကြာထိတွေ့ခြင်းက ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ […]
မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဇနကဟောကိန်း
မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဇနကဟောကိန်း သင့်​အသက်​ ဘယ်​​လောက်​လဲ? ဘာ​နေ့​မွေးလဲ?သာမှန်​မှန်​​ပြောပါ…ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနက မင်း၏ ဖြစ်စဉ် ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ရှေး ဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင် ထားခြင်းဖြစ်သည်။အလွန်လွယ် ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ ပညာရှင်များထ်ိ သုံးစွဲနေသော တွက် ကိန်းဖြစ်ပါသည်။တွက် ကိန်းအား ပုံသေ ကားချမယူပဲ မဟာ ဘုတ်စသော အခြားတွက်ကိန်းများနှင့်ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အ စွမ်းထက်သော ဟောကိန်းဖြစ်သည်။ အဟောကြည့်နည်း…. ဥပမာ – မိမိက တနင်္ဂနွေ သားသမီး အခုရောက် သက် ၂၅ နှစ်ဆိုရင် တနင်္ဂနွေ ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၅ ကို ရှာပါ။ * နန်း * အကွက်ထဲ တွင်ရှိ၍ ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။ မိမိက တနင်္လာသားသမီး […]